Free fanompoana an-tserasera. Calculating ny haben'ny amin'ny ambaratonga amin'ny milina dingana
Kajy ny amin'ny ambaratonga tamin'ny dingana pivoting ny 90 °
sary sehatra 1: 12345678910
Ny sakan'ny ny tohatra Z
Isan'ny dingana rehetra C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
Isan'ny dingana milina C2 234567891011121314151617181920
Isan'ny ambaratonga ambany C1 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
Ny hatevin'ny ny dingana W
Ny hatevin'ny amin'ny kofehy T
Asehoy risers H
Fomba calculating ny hazo tohatra
Z - Ny sakan'ny ny tohatra
W - Ny hatevin'ny ny dingana
C1 - ny isan'ny dingana ao ambany diabe
C2 - Isan'ny dingana milina
Kajy ny amin'ny ambaratonga tamin'ny dingana pivoting ny 90 °.
Tohatra hazo amin'ny dingana milina afaka nitsitsy toerana be ao an-trano tsy misy very ny tsy hanahirana sy ny fahafaha-miasa.
Rehefa calculating fanamarihana ny optimum isan'ny dingana milina. Raha ny zava-nitranga optimum dingana 3 miaraka amin'ny sakan'ny tohatra tamin'ny 80 cm. More - dingana ho tery loatra ary noho izany nahazo aina.
Raha ny fanokafana fotsiny no misy eo an-tampon'ny ny ambaratonga, ny haavon'ny toerana manan-danja eo amin'ny nifandimby mba hifanindry, mba tsy lohany ratra. Tokony ho 2 metatra, fara fahakeliny.
Miaraka amin'izany rafitra, ny sakan'ny zava-dehibe ny tohatra. Satria misy fiantraikany mivantana amin'ny mora ny fihodinana dingana. Ny midadasika kokoa ny tohatra - ny lehibe kokoa ny isan'ny dingana azo ampiharina tsy misy intsony ny tsy hanahirana.
Noho ny faha-samihafa ny tetikasa sy ny rafitra, handrails ho tohatra tao amin'ny fandaharam-potoana tsy azo kajy sy aseho.
Important! Mariho ny lafiny dingana milina. Mba hahazoana ny haben'ny dingana - aza adino ny hanampy danja ireo haben'ny ny protrusion.
Kajy ny tohatra mba hiditra ao ny vato tsy misy hafa amin'ny kajy ny hazo na vy tohatra. Ny zava-dehibe indrindra - ny kajy ny haben'ny ny dingana. Ny hahavony dia takiana mba ho toy izany koa ho an'ny faritra rehetra.
Kajy ny tsy hanahirana tohatra dia nokajiana avy ny rijan-mifototra amin'ny dingana lavan'ny.
Dingana lava dia olona avy amin'ny 60 ka hatramin'ny 66 sm, eo ho eo - 63 cm.
Aina tohatra mifanaraka amin'ny raikipohy: 2 dingana ambony + lalina haavon'ny = 63±3 cm.
Ny tena mety fisainan'ny tohatra - hatramin'ny 30 ° ny 40 °.
Lalina dingana tohatra dia tsy maintsy hihaona amin'ny habe 45 kiraro - tsy latsaka ny 28-30 cm.
Tsy ny lalina afaka manonitra ny amin'ny fanitarana ny dingana.
Ny haavon'ny ny dingana tokony ho hatramin'ny 20-25 cm.
Hanatona ny fandaharana ny blueprints tohatra amin'ny milina dingana amin'ny lafiny lehibe sy ny halehiben'izao.
Ny sary mampiseho ny lafiny ankapobeny ny tohatra, manamarika ny tampon'ny ny dingana eo amin'ny kofehy, ny zorony ny dingana sy ny fototra dia endriky ny dingana tena.
Manantena aho fa ny fandaharana dia hanampy anao planina sy hanorina tohatra mba hijoro ho vavolombelona, na any an-trano miaraka amin'ny tànany.